WatchOS 3 beta 4 ikozvino yawanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 3 beta 4 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
Kwapera chinguva pane mamwe ese ma beta shanduro asi iyo beta 3 yewatchOS 4 vanogadzira. Apple yakaparura yechitatu beta vhezheni yeiyoOSOS inoshandisa system nezuro masikati uye nayo inovhara veta beta kusvika svondo rinouya kana pamwe rinotevera.
Iyo beta iri chete inowanikwa kune vanogadzira neakaundi account Iyo haina yeruzhinji beta vhezheni uye mune ino pfungwa inenge iri nani sezvo ichifanira kucherechedzwa kuti kana yaiswa chete hapana kudzokera kumashure, saka kana iwe uine matambudziko, kusapindirana kana zvakafanana hatigone kuita chero chinhu kudzokera kune yapfuura vhezheni.
Iyo yekuvandudza inowedzerwa mune beta vhezheni yeWOSOS 4 yave ichiwanikwa kubvira muna Chikumi wapfuura payakapihwa muWWDC keyword, uye mupfungwa iyi zvinoita sekunge beta 3 inotarisa pane kugadzikana kwesystem uye kugadzirisa bug yakataurwa nevakagadziri mune vhezheni yapfuura.
Mune iyi vhezheni nyowani isu tine yakanaka shoma shanduko uye nhau, asi pamusoro pezvose, iwo matsva mabhaisikopo ePstrong firimu, Toy Nyaya na Woody, Buzz, Jessie nevamwe vese vatambi, doko nyowani nekubatanidzwa neAirPods uye zvimwe zvinobatsira zvitsva senge "tochi" sarudzo. Parizvino, iyo vhezheni itsva ichavhurwa zviri pamutemo mumavhiki mashoma kune vese vashandisi veApple Watch uye hatikurudzire kuiisa pamawatch kune vanhu vasiri vagadziri kunyangwe paine nhau dzinopihwa neshanduro iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 3 beta 4 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
4 zvakadzikiswa zvakadzimwa maapplication kuti uwane zvakanyanya kubva paMac yako
Maitiro ekudzivirira mavhidhiyo kubva otamba otomatiki muSafari